I-Heathvale Heights Cottage - I-Airbnb
I-Heathvale Heights Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Malcolm & Val
U-Malcolm & Val Ungumbungazi ovelele
Nethezeka, Khululeka, Yehlisa ingcindezi, Phefumula
I-Heathvale Heights Cottage isanda kufakwa ohlwini lwezindawo zokuhlala ezizimele zemibhangqwana esemapulazini ethulile eduze kwaseDunkeld. Vuka embhedeni olingana nendlovukazi ukhululekile futhi ulalele ama-kookaburras ezihlahleni. Igumbi lokugezela eliwubukhazikhazi, elibanzi elinebhavu le-clawfoot, ishawa yokuhamba ngezinyawo nezitsha ezingamawele liseduze negumbi lokulala. Ikhishi / indawo yokudlela / indawo yokuhlala evulekile inokubukwa kwe-Mt Abrupt ngefasitela lezithombe ezicwebezelwe kabili.
Dwala esihlalweni esingalweni futhi ubuke esibhakabhakeni ebusuku.
I-Cottage inoveranda omuhle, ngaphansi kuhlezi ifenisha yangaphandle ukuze kuphumuleke. Itshe loqobo 'ishede lebhethri' manje lihlala ilondolo yakho. (umshini wokuwasha uyatholakala). Ushimula wokuqala omile wamahhala ubingelela izintaba njengoba ubuka uhla lweGrampians. Zibonele ngokuphila kwasemaphandleni njengoba izimvu ziklaba futhi zizulazula emadodeni.
Kubantu abahamba ngezinyawo, abahamba ngezinyawo nabahamba ngezinyawo zemvelo - ukungena okuhle kakhulu e-Grampians National Park eduze ne-Mt Surgeon, i-Mt Abrupt & Piccanniny entry.
Inhloko-dolobha yase-Dunkeld (imoto emfushane ekuhlaleni kwakho) inikeza amathilomu, i-respore, i-okaery, ukudla okuhle e-Royal Mail Hotel kanye namanye amasevisi abalulekile. Ngena edolobheni ngokuhambahamba emgwaqweni ngokomlando noma uvakashele i-Museum. Izindawo zasemadolobheni eziseduze okungukuthi i-Cavendish (Ihhotela le-Bunyip), i-Penshurst ne-Tarrington zinikeza okokuzithokozisa kokudla okwengeziwe, isitolo sesipho/isoka, umnyango wamaselula nebha yewayini. Izinsuku ezimbalwa azinde ngokwanele!
Ibungazwe ngu-Malcolm & Val
Singase sithintwe futhi sithande ukwabelana nawe ngomlando wendawo kanye nolwazi olubalulekile lwendawo. Usendaweni ye-Sheep Farm esebenzayo - siseduze..
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi ukuhlala ungaphazanyiswa kuyaqinisekiswa ngaphandle uma kucelwe ngenye indlela. Izinqubo eziphephile ze-Covid-19 zikhona.
UMalcolm & Val Ungumbungazi ovelele